Izindlela ezi-5 ze-Snapchat Zingasetshenziselwa Ukukhuthaza Ibhizinisi Lakho | Martech Zone
Izindlela ezi-5 ze-Snapchat Zingasetshenziselwa Ukuthuthukisa Ibhizinisi Lakho
NgoLwesibili, Septhemba 20, 2016 NgeSonto, uJanuwari 15, 2017 Douglas Karr
Njengoba amapulatifomu omakhalekhukhwini akhula ngokuthandwa, kuhlale kunethuba lokusebenzisa ipulatifomu ukuxhumana nokuxhumana nabathengi abangaba khona. Ngokusobala uSpapchat ukudlulile lokho okulindelekile, nabasebenzisi abangaphezu kwezigidi eziyi-100 nsuku zonke ababuka amavidiyo angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane eziyisishiyagalombili nsuku zonke.
I-Snapchat inikela ngemikhiqizo nabakhiqizi bokuqukethwe ithuba dala, phromotha, uklomelise, usakaze, futhi usebenzise amandla wokuxhumana ayingqayizivele epulatifomu.
Abathengisi bayisebenzisa kanjani i-Snapchat?
I-M2 ibambe i-Australia wabelane nge-infographic enhle, ukuthi i-Snapchat ingayandisa kanjani i-Brand yakho, futhi inikeze ngezindlela ezinhlanu ezilandelayo inkampani yakho engayisebenzisa i-Snapchat.
Nikeza ukufinyelela kumicimbi ebukhoma - jabulisa izethameli zakho ngombono oqondile wokwethulwa komkhiqizo, imibukiso yezohwebo, noma imicimbi eyodwa yomusa.
Diliva okuqukethwe okuyimfihlo - nikela ngokuqukethwe okukhethekile noma okuhlukile kuzethameli zakho okungenzeka zingakutholi kwamanye amapulatifomu.
Nikeza imincintiswano, izinzuzo noma ukukhushulwa - Nikeza ngamakhodi wokukhushulwa noma izaphulelo kubalandeli. Ukupha nokwenyusa kuyizindlela ongagcina ngazo abalandeli bakho bebuya.
Thatha abantu ekusithekeni - hlanganisa izithameli zakho ngokunikeza okuqukethwe okwenzeka ekusithekeni futhi ubonise ukuthi umkhiqizo wakho uzihlukanisa kanjani.
Uzakwethu nabathonya be-Snapchat - abanamakhono Abathonya be-Snapchat ingakusiza ukuthi usabalalise ukuqwashiswa kwabantu okunzima ukukufinyelela ngemidiya yendabuko.
Tags: Snapchatukumaketha kwe-snapchat
I-Adobe Spark: I-Social Graphics, Izindaba zeWebhu namavidiyo we-Animated
Sep 21, 2016 ku-5: 16 AM
I-athikili efundisa kakhulu. Ngivumelana nawe ukuthi ngokwanda kokuthandwa kwezinkundla zokuxhumana, kuhlale kunethuba lokusebenzisa ipulatifomu ukuxhumana nokuxhumana nabathengi abangaba khona. I-Snapchat yinethiwekhi yezokuxhumana edumile ekuvumela ukuthi wabelane ngamavidiyo nezithombe nabangani bakho nomndeni wakho. Bonke abasebenzisi befoni ehlakaniphile babuka okungenani ividiyo eyodwa nsuku zonke. Ngiwathande amaphuzu amahlanu okuxoxwe ngawo kulesi sihloko ngendlela ama-brand asebenzisa ngayo i-snapchat. Amabhizinisi asebenzisa i-snapchat ukukhushulwa komkhiqizo kanye nokuletha okuqukethwe okuyimfihlo. Funda lesi sixhumanisi: https://www.animatedvideo.com/blog/numbers-branding-snapchat/
Lesi sixhumanisi sabelana ngamathuba okwenza uphawu lwe-snapchat.